192.168.8.1 -Khusela iNethiwekhi yakho yeWiFi
Khusela iNethiwekhi yakho yeWiFi iyimfuneko ngelixa kufikwa ekugcineni abahlaseli kunye nokukhusela idatha yakho.
Uyikhusela njani inethiwekhi yakho ye-Wi-Fi
Ku Khusela inethiwekhi yakho ye-Wi-Fi igcina ikhuselekile kubagculeli, kukho amanyathelo amaninzi ekufuneka uwathathe:
1.Alter default username & passkey
Into yokuqala kunye neyona ibalulekileyo ekufuneka uyenzile ukukhusela i-Your WiFi Inethiwekhi kukutshintsha amagama asetyenziswayo kunye neepassword kwinto eyongezelelweyo ekhuselweyo.
Abathengisi beWi-Fi babela ngokuzenzekelayo igama lomsebenzisi kunye nenqaku lokugqitha kwinethiwekhi kunye nabaculi banokufumana oku kungagqibekanga kwikhompyutha. Ukuba banokufikelela kwinethiwekhi, banokutshintsha i-passkey kuyo nayiphi na into abayifunayo, batshixe umthengisi ngaphandle kwaye bathathe inethiwekhi.
Ukutshintsha amagama abasebenzisi kunye neephasiwedi kwenza kube nzima ngakumbi kubahlaseli ukuba bafumane i-Wi-Fi kabani kwaye bafumane ukufikelela kwinethiwekhi. Abagculi banezinto zobuchwephesha eziphezulu ukuvavanya amakhulu eepaskey kunye namagama abasebenzisi, ngenxa yoko kubalulekile ukuba ukhethe iphasiwedi enamandla edibanisa iisimboli, iileta kunye neenombolo, ukwenza ukuba kube nzima ukumisela.
2.Tshintsha iNethiwekhi engenaNgcingo yokuNgena ngeNethiwekhi
Encryption yenye yeendlela ezifanelekileyo zokukhusela idatha yakho yenethiwekhi. Ukubhala ngokufihlakeleyo kusebenza ngokudibanisa idatha yakho okanye imixholo yemiyalezo ukuze ingabinakunqandwa ngabagculi.
3.Ukusebenzisa iVPN yeNethiwekhi yangasese yangasese
Inethwekhi yabucala eyiNtloko yenethiwekhi ekuvumela ukuba uqhagamshele ngaphezulu kwenethiwekhi engabhalwanga, engakhuselekanga ngendlela yobuqu. I-VPN ibhala idatha yakho ukuze i-hacker ingakwazi ukunxibelelana nezinto ozenzayo kwi-Intanethi okanye apho ubekwe khona. Ukongeza kwidesktop, inokusetyenziswa nakwilaptop, kwifowuni okanye kwithebhulethi. Kunye nedesktop, inokusetyenziswa kwifowuni, kwilaptop, okanye kwithebhulethi.
4. Cima iNethiwekhi yeWi-Fi xa ungekho ekhaya
Kubonakala kulula kodwa enye yeendlela ezilula zokukhusela iinethiwekhi zakho zekhaya ekuhlaseleni kukuyicima xa ukude nekhaya. Inethiwekhi yakho ye-Wi-Fi ayifuni ukuba isebenze iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezisi-7 ngeveki. Ukucima i-Wi-Fi yakho ngelixa ungekho ekhaya kunciphisa ukubakho kwabagculi abanobuchule abazama ukungena kwinethiwekhi yakho ngelixa ukude nekhaya.
5. Gcina i-software ye-router ihlaziywa
Isoftware yeWi-Fi kufuneka ibe yala maxesha ukukhusela ukhuseleko lwenethiwekhi. Iifirmwares zeemizila njengalo naluphi na uhlobo lwesoftware zinokubandakanya ukubhengeza apho abahlaseli banqwenela ukuxhaphaza. Ii-routers ezininzi azinakukhetha uhlaziyo oluzenzekelayo ngenxa yoko uya kufuna ukuhlaziya ngokwasemzimbeni isoftware ukuze uqiniseke ukuba inethiwekhi yakho ikhuselekile.
6. Sebenzisa iiFirewwall
Ubuninzi bee-routers ze-W-Fi zinendawo eyakhelwe-ngaphakathi yenethiwekhi yomlilo ekhusela uthungelwano lwebhendi ebanzi kwaye ujonge nakuphi na ukuhlaselwa kwenethiwekhi kwii-stalkers. Baya kuba nenketho yokumiswa ngoko kubalulekile ukuba uhlole ukuba i-firewall yakho yomlilo ivuliwe ukuze ungeze ukhuseleko olongezelelweyo.
7. Ukucocwa kwemvume yedilesi ye-MAC
Uninzi lwee-routers ze-broadband zibandakanya isazisi esikhethekileyo esaziwa njengedilesi yolawulo lweMedia Media (MAC). Oku kufuna ukomeleza ukhuseleko ngokujonga inani lezixhobo ezinokuthi zidibane neenethiwekhi.